फिटनेस समाचार अपडेट - कोसी अनलाइन | Koshi Online
विराटनगर । दिनमा एउटा स्याउको सेवनले डाक्टरलाई टाढा राख्छ भन्ने भनाइ नै छ । भिटामिन सी, फाइबर र पोटासियमसहित पोषक तत्वले भरिएको स्याउले शरीरलाई स्वास्थ्य राख्न सहयोग पुर्‍याउने गर्छ । तर, क
विराटनगर । लामो अध्ययन र अनुन्धानपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले शारीरिक व्यायाम सम्बन्धी नयाँ डाइडलाइन तयार गरेको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा धेरै मानिस घरभित्र
यसकारण जाडो मौसममा धेरै भोक लाग्ने तथा तौल बढ्ने हुन्छ
बुधबार, १५ पुस, २०७७
विराटनगर । जाडो मौसममा अन्य मौसमको तुलनामा बढी भोक लाग्ने तथा तौल बढ्ने हुन्छ । पहिलेको जस्तो दैनिक गतिविधिहरू गर्दै आएपनि तौल बढेको जस्तो अनुभव हुनेगर्छ । जाडो महिनाहरूमा प्रायः व्यक्तिको तौल बढ्
बिहानको खाजामा गर्ने केही गल्तीले बढ्छ तौल
बिहीबार, ०९ पुस, २०७७
विराटनगर । बिहानको खाजा (ब्रेकफास्ट) दिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खाना हो । विशेष गरी तौल घटाउने प्रयासमा रहेका मानिसले ब्रेकफास्ट खान छोड्नु हुँदैन । स्वस्थ ब्रेकफास्टले दिनको सुरुआत गर्न ऊर्जा दि
यो उपायले तीन दिनमा एक किलो तौल घटाउन सकिने
मङ्गलबार, ०७ पुस, २०७७
विराटनगर । तौल घटाउनु कुनै सजिलो काम मानिँदैन । शरीरको अनावश्यक बोसो तथा तौल घटाउन समर्पण र निरन्तर प्रयासको आवश्यक हुन्छ । खराब खाने बानी, जीवनशैली र अन्य धेरै कारणले तौल बढ्नका लागि जिम्मेवार छन
मङ्गलबार, ३० मङ्सिर, २०७७
विराटनगर/प्रत्येक दिन कम्तिमा ३० मिनेट व्यायाम गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ, तर यसलाई तालिका मिलाएर नियमित गर्नु पनि त्यस्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यायाम गर्ने समय निर्धारण गरी दैनिक त्यही समयमा व्यायाम ग
बुधबार, २४ मङ्सिर, २०७७
विराटनगर/ जिम जान तथा अन्य प्रकारको व्यायाम गर्न अल्छी लाग्ने मानिसले नाचेर पनि तौल कम गर्न सक्छन् । नृत्य (डान्स)लाई धेरैजसो बेला एक मनोरन्जन गतिविधिको रूपमा मानिन्छ, तर वास्तविकतामा यो एक फिटनेस गत
तौल घटाउनको लागि पिस्ता फाइदाजनक
विराटनगर/ ड्राइ फ्रुट्सले पौष्टिकता प्रदान गर्न मात्र नभइ तौल घटाउन पनि मद्दत पुर्‍याउँछन् । ड्राइ फ्रुट्समा कम क्यालोरी र प्रोटिनको मात्रा अधिक हुन्छ । हरेक पटक ड्राइ फ्रुट्सको कुरा आउँदा, हा
विराटनगर, १७ मङ्सिर । राम्रो र सही तरिकाले पुसअप गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाँही सोचेको जस्तो हुँदैन । नियमित अभ्यास गर्दागर्दै पनि पुसअप गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने सही तरिकाले नअपनाउँदा, वार्मअप न
विराटनगर, १५ मंसिर । दौडनु वा कुद्नु व्यायाम तथा शारीरिक गतिविधिका लागि लोकप्रिय तरिकामध्ये एक हुन् । यसलाई दैनिक व्यायाम तालिकामा समावेश गर्न सजिलो हुनुका साथै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य लाभ पनि धेर
व्यस्त रहने पुरुषका लागि सजिलै तौल घटाउने उपाय
बिहीबार, ०४ मङ्सिर, २०७७
विराटनगर, ४ मंसिर । पुरुष होस् वा महिला तौल कम गर्नु कसैको लागि पनि सजिलो हुने कुरा होइन । इन्टरनेटमा उपलब्ध सबै तौल घटाउने सल्लाह धेरैजसो महिलाका लागि मात्र लक्षित हुने गर्छ । तर, उच्च टेस्टोस्टे
विराटनगर, १४ असोज । करेला तौल कम गर्न र मधुमेह पीडित मानिसहरूमा रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्ने क्षमताको लागl चिनिने एक प्रभावकारी तरकारी हो । आवश्यक पोषक तत्वहरूले भरिएको करेलाका विभिन्न स्वास्थ्य ल
बिहीबार, ०८ असोज, २०७७
विराटनगर, ८ असोज । तौल घटाउनु एकदाम गाह्रो कार्य हो, जसमा प्रयास र नियमितता चाहिन्छ । तौल एकै दिनमा घट्छ भन्ने हुँदैन । तौल घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न हरेक दिन सानो-सानो प्रगति हासिल गर्दै लानुप
तौल घटाउनका लागि यसरी गरौं ल्वाङको प्रयोग
विराटनगर, ८ भदौ । ल्वाङ, एक साधारण मसला हो, जुन सजिलै प्रत्येक भान्छामा पाउन सकिन्छ । ल्वाङको अनौंठो स्वाद र गन्धका कारण, यसलाई धेरै खानेकुरामा पनि प्रयोग गरिन्छ । ल्वाङलाई लगभग दैनिक सेवन गरि
यस्ता छन् व्यायाम गरेर पसिना बगाउनुका फाइदा
शुक्रबार, ०५ भदौ, २०७७
विराटनगर, ५ भदौ । गर्मीमा पसिना आउनु सामन्य मानिन्छ । शरीरबाट केही मात्रामा पसिना चुहाउनु स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । पसिना ग्रन्थीहरूले छालालाई शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरू फिल्टर गर्न मद
तौल घटाउनको लागि घिउको सेवन फाइदाजनक
सोमबार, ०१ भदौ, २०७७
विराटनगर, १ भदौ । अधिकांश मानिसहरुले तौल घटाउन सुरु गर्दा घिउको सेवन छोड्ने गर्छन् । तर, घिउले शरीरमा अतिरिक्त तौल बढाउनेभन्दा पनि शरीरको अनावश्यक तौलबाट छुट्कारा दिलाउन मद्दत गर्छ । घिउमा
दैनिक एक हजार कदम हिँड्दा मधुमेह तथा उच्च रक्तचापको जोखिम कम हुने
बुधबार, २८ जेठ, २०७७
विराटनगर, २८ जेठ । विश्वका धेरै व्यक्तिहरूमा मधुमेह वा उच्च रक्तचापको समस्या हुन्छ । यी रोगहरूमध्ये एउटा हुने सम्भावना कम गर्ने एक सजिलो तरिका रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । हिँड्
विराटनगर, १२ जेठ । शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि नियमित रूपमा व्यायाम गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । फिटनेसका लागि व्यक्तिहरू आफ्नो व्यायामको तालिकामा जिम जाने, योग गर्ने, र एक्सर्साइजको सहारा लिन्
यस कारण मोटो मासिनमा कोरोना संक्रमणको बढी जोखिम हुन्छ
विराटनगर(एजेन्सी), ४ जेठ । मोटो मानिसहरूलाई कोरोना भाइरस (कोभिड १९ ) को जोखिम हुनसक्ने विभिन्न अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेको छ । नेसनल हेल्थ सर्भिसको अध्ययनले कोभिड १९ बाट मोटोपना भएका मानिसको मृत्
धेरै समय एकै ठाउँ बसिरहँदा निम्तिने समस्या
बुधबार, ३१ वैशाख, २०७७
एजेन्सी, ३१ वैशाख । आजकल मानिसहरू घण्टौंसम्म कार्यालयमा बसेर काम गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बसिरहनुपर्ने हुँदा स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ । उठ्नु वा हिंड्नभन्दा बस्दा कम इनर्जी खर्च हु
तौल घटाउन अधिक प्रभावकारी डिटक्स वाटर (बनाउने विधिसहित)
एजेन्सी, १० वैशाख । तौल घटाउने यात्रामा मानिसहरू अधिक एक्सर्साइज गर्ने, धेरै खानेकुराहरूको त्याग गर्ने गर्छन् र आवश्यक पोषण खान बिर्सिन्छन् । तर, तौल घटाउनका लागि पनि सन्तुलित भोजन खान आवश्यक हुन्छ ।
सोमबार, ०८ वैशाख, २०७७
विराटनगर, ८ वैशाख । मोटोपनाले धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले तौल नियन्त्रण गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ । तर, धेरै व्यक्तिहरू पनि छन् जसलाई तौल बढाउनको चिन्ता हुन्छ । कम तौल भएक
गर्मीमा सजिलै तौल घटाउने चार तरिका
आइतबार, ०७ वैशाख, २०७७
विराटनगर, ७ वैशाख । यदि तपाईंले धेरै तरिकाले वजन घटाउन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ र सफल हुनु भएको छैन भने निश्चित रूपमा यी चीजहरूको बारेमा जान्नुहोस्, जसले गर्मीमा शरीरको तौललाई सजिलै कम गर्न सक्छ । जा
लकडाउनको सदुपयोग : एक हप्तामा शरीरको तौल घटाउने तरिका
शुक्रबार, ०५ वैशाख, २०७७
विराटनगर, ५ वैशाख । लकडाउनको समयमा केही काम गर्ने नहुँदा र खाएर दिनभरि सुत्ने तथा मोबाइलमै व्यस्त हुने हुँदा मानिसहरूको तौल बढिरहेको छ । घरबाहिर निस्किन प्रतिबन्ध लागेपछि मानिसहरू वाकमा, जिम तथा व
लकडाउनमा पुसअप गर्न सिक्नुहोस्, १० पटक गर्न नसके लाग्छ मुटुरोग
बिहीबार, ०४ वैशाख, २०७७
विराटनगर, ४ वैशाख । कामका व्यस्तताका कारण मानिसहरू व्यायाम गर्न समय पाइरहेका हुँदैनन् । नियमित व्यायाम नगर्दा शरीरमा मोटोपन बढ्नुका साथै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ । तर,
अत्यधिक व्यायामले महिला तथा पुरुषमा गर्ने नकारात्मक असर
विराटनगर, १५ फागुन । स्वास्थ र फिट रहनका लागि गरिने व्यायामका धेरै फाइदाहरू छन् । व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसहरूमा मोटोपनाको समस्या बढिरहेको छ । समय नभएका कारणले मानिसहरू कम समयमा अत्यधिक व्याया
तौल नियन्त्रणमा ल्याउन बेलुकाको खाना चाँडै
विराटनगर, १४ माघ । खाना खाने समयले गर्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखिने गर्छ । दैनिक खाना खाने समय तालिका बनाएर दिनदिनै यसलाई फलो पनि गर्न सक्नु पर्छ । स्वास्थ्य रहनका लागि बेलुकाको खा
तौल घटाउन यी खानेकुरा त्यागौं
विराटनगर, १२ माघ । खानेकुरामा गरिएको सानो गल्तीका कारण तौल नियन्त्रण हुन सकिरहेको हुँदैन । कहिलेकाँही जानेर वा नजानी हानिकारक नहुने, नदेखिने खानाले पनि तौल बढाइरहेको हुन्छ । तौल बढाउनुका साथै खाना
विराटनगर, १२ माघ । बिहान मनतातो पानी पिउनु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट अति लाभदायक छ । मनतातो पानी पिउनाले शरीरमा रक्तसंचार सन्तुलित र नियमित हुन्छ । पानी पिउनाले एसिडिटीको समस्या पनि कम हुन्छ ।
एक हप्तामै गोरो हुने मन भए यस्तो छ घरेलु उपाय
विराटनगर, १० माघ । गोरो र सुन्दर हुन हरेकलाई मन लाग्दछ । गोरो हुन हामीमध्ये धेरैले अनेकौं केमिकल र कस्मेटिक समाग्री प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । तर घरमा अझ भनौँ भान्सामा भएका केही समाग्रीले पनि तपाई
बाल्यकालमा झगडा गर्नु फाइदाजनक
घरमा बालबालिकाहरू सानो सानो कुरामा एक आपसमा झगडा गर्छन् भने फाइदाजनक हुन सक्छ । बाल्यकालमा आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई दुःख दिएको, पिटेको, खानेकुरा तथा लुगाको निहुँमा झगडा गरेको समझदा पनि कति रमाइ
विराटनगर, २९ पुस । हामीले खाने खाना र प्रयोग गर्ने विभिन्न सामानले नै शरीर तथा छालालाई उमेरअगावै दिनप्रतिदिन बुढो बनाइरहेको छ । जानेर वा नजानी प्रयोग गरेका विभिन्न सामानहरू तथा सानातिना लापरवाहीका का
यस्तो भएमा दिनभर अल्छी लाग्छ
विराटनगर २२ पुस । दिनभर थकाई लाग्ने वा अल्छि लाग्ने विभिन्न कारणले हुन्छ । कार्यालयमा काम गर्दा होस् वा घरायसी काममा मन नजाने हुँदा कार्य क्षमतामा समेत कमि आइरहेको हुन्छ । राती आरामले प्रशस्त न
वासिङ्टन, २७ मङ्सिर । योगले मस्तिष्कलाई फाइदा पु¥याउने पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ । मस्तिष्कको विकास र कार्यक्षमता वृद्धिमा योगले सहयोग पु¥याउने वैज्ञानिक अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘ब्रेन
स्मार्टफोनको प्रयोगले बुढ्यौलीमा निम्त्याउछ समस्या
अहिलेको युगमा मानिसको दैनिक जीवनको सबै भन्दा आवश्यक अंग बनेको छ स्मार्टफोन अर्थात् मोबाइल । मोबाइल फोनले घडी, क्यामरा, रेडियो तथा टिभी लगायतका कामहरू गर्ने हुँदा मोबाइल बिना एकछिन पनि बस्न नसक्ने समेत
व्यायाम गर्दा डिप्रेसनको सम्भावना घट्ने
बिहीबार, २८ कात्तिक, २०७६
विराटनगर, २८ कात्तिक । नियमित रूपमा व्यायाम गर्दा शरीरको तौलका साथ साथै डिप्रेसनको सम्भावना पनि घट्ने देखिएको छ । हरेक दिन आधा घण्टा वा मिलाएर हप्ताको चार घण्टा व्यायाम गर्ने व्यक्तिहरूमा डिप्रेसनको स
बिहीबार, २१ कात्तिक, २०७६
विराटनगर, २१ कात्तिक । कामको व्यस्तता, जीवनशैलीमा परिवर्तन, निन्द्रा र व्यायामको कमी तथा खानपानमा लापरवाही बढेसँगै मानिसहरूले आफ्नो शरीरको हेरचाह गर्न राम्ररी सकिरहेका छैनन् । मानव शरीरलाई ताजा र काम
शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन ‘जुम्बा डान्स’
मङ्गलबार, १९ कात्तिक, २०७६
विराटनगर, १९ कात्तिक । शरीरको अनावश्यक बोसोलाई पगालेर, तौल घटाएर फिट राख्ने चाहना सबैलाई हुन्छ । स्वस्थ रहनको लागि सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निन्द्राका साथ साथै नियमित व्यायाम पनि अति आवश्यक हुन्छ । निय
मङ्गलबार, १४ असोज, २०७६
विराटनगर, १४ असोज । मोटोपन धेरैजसो मानिसहरूको समस्या बनिसकेको छ । शरीरको तौललाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दासमेत असफल भएर धेरै मानिसहरू तनाव तथा चिन्तामा रहेको पनि धेरै उदाहरणहरू पाइन
तौल घटाउन भूतको फिल्म
मङ्गलबार, ३१ भदौ, २०७६
विराटनगर ३१ भदौ । भूतको फिल्म हेर्दा प्राय: मानिसहरु डराउने गर्दछन् । तर, भूतको फिल्म हेरेर मात्र पनि आफुलाई स्वास्थ्य राख्नुका साथै शरीरको अनावश्यक तौलसमेत घटाउन सकिन्छ । सुन्दा अनौFठो लागेपनि भुतको
गर्मीले सतायो ? सातुले शरीरलाई शितल बनाउनुहोस् !
पछिल्लो केही दिनयता गर्मी अत्याधिक बढेको छ । गर्मीका कारण दैनिक जीवन यापनमा पनि कठिनाई छ । गर्मीमा शितलता प्रदान गर्न सातु उपयोगी मानिन्छ । सातु मकै, चना, जौ अर्थात् कोदोको बनाउने गरिन्छ । सातुमा कागत
विवाहपछि एक्कासी किन मोटाउँछन् महिला ?
विराटनगर, १२ भदौ । धेरैजसो महिलाहरु विवाहपछि छिट्टै मोटाउने गरेको देखिन्छ । धेरै महिलाहरुले विवाहपछि कम समयमा नै मोटाएको भनेर गुनासोसमेत गरिरहेका हुन्छन् । दुब्ली–पातली भएका महिलाहरुसमेत विवाहपछि मोटा
बिहीबार, ०५ भदौ, २०७६
विराटनगर । बढ्दो तौल, मांशपेशी र जोर्नीमा हुने दुखाई अनि बिना कारण हुने कमजोरी र अल्छि लाग्ने अहिले आम समस्या हुन थालेको छ । यस्तो समस्या धेरै जसो थकाई र अनिन्द्राको कारण हुने गरेको छ । खासमा जी
विराटनगर । साह्रै सामान्य मानसिक स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित समस्याहरु जस्तै उदासीनता र चिन्ता (एन्जाइटी र डिप्रेशन) विश्वव्यापी समस्याका रुपमा बढ्दै गएको छ । यो सामन्य स्वास्थ्य समस्या भएपनि दीर्घकालिन
पेटको बोसो घटाउने सरल उपायहरु
मङ्गलबार, २१ साउन, २०७६
विराटनगर। ब्यस्त जीवन, गलत खानपान, ब्यायाम नगरेको कारण, लापरवाही र तनाब का कारण आजकाल प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो शरीरको तौलबाट दिक्क मानिरहेका छन् । शरीरमा कार्वोहाइड्रेटको मात्रा बढ्ने र शरीर मोटाउने सम
छालालाई स्वस्थ्य र किशोरअबस्थाको झै राख्ने भिटामिन ए, के- के मा पाइन्छ ?
विराटनगर । मानिसहरूलाई स्वस्थ रहन भिटामिन एको महत्वपुर्ण स्थान छ । भिटामिन एले शरीरको विकाससंगै आँखा, प्रजनन र छालालाई स्वस्थ्य राख्न मद्धत गर्छ । भिटामिन ए विशेषगरि जनावरको मासुमा पर्याप्त पाइन्छ
काठमाडौंं । सुन्दर देखिने रहर नहुने सायद को होला ? हामी मध्ये धेरै त विहानीको सुरुवात नै ऐना वा मोवाइलको क्यमेरमा अनुहार हेरेर मात्रै सुरु गर्छाैँ होला । एक सब्दमा भन्नु पर्दा सुन्दर र स्वस्थ जीवन